Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2020, phakathi kweemveliso eziphambili zeshishini lokuvelisa ibhetri e-China, ukuphuma kweebhetri ze-lithium-ion yayizi-7.15 yezigidigidi, ngokunyuka konyaka-nge-1.3%; imveliso yeebhayisikile zombane yayizi-11.701 yezigidi, inyuke ngonyaka-nge-10.3%. Ngokwe ...
Ukunyuka kwexabiso leCobalt kudlulile kulindelo okanye kuya kubuyela kwinqanaba elifanelekileyo
Kwikota yesibini ye-2020, inani elipheleleyo lokungenisa izinto ze-cobalt eziluhlaza yayiziitoni ezingama-16800, kunye nokwehla konyaka-nge-19% ngonyaka. Phakathi kwazo, inani lilonke lokungenisa elizweni le-octobic yayiziitoni ezili-0100 zeetoni zentsimbi, kunye nokwehla konyaka ngama-92%; ukungeniswa okupheleleyo kweemveliso eziphakathi zecuba ...
Ibhetri yeLithium iye yafumana ukutshintshwa kwebhetri ye-nickel cadmium kunye ne-nickel hydrogen ibhetri. Ukusuka kwimbono yesikali sentengiso, isikali sentengiso sehlabathi se-lithium ibhetri yezixhobo zamandla ziya kufikelela kwi-9.310 yezigidigidi ze-yuan ngo-2019, kunye nesikali sentengiso se-lithium battery ...
Nge-22 ka-Agasti ka-2018, phantsi kombutho weziko lolawulo lwabasebenzi, abanye abasebenzi be-TRUE POWER baqhuba kangangeyure enye ukuya e-Jinsha bay ehotele yokuphuhlisa ihotele, baqala uqeqesho losuku olunye. Wonke umntu wavuya wahleka umoya ubuphezulu. Injongo yale ex ...
Nge-12 ka-Okthobha i-2019, uMboniso we-Elektroniki wase-Hong Kong obanjwe ziimithombo zehlabathi wabanjwa kwi-Asia International Expo eHong Kong. AMANDLA OKWENYANISO ayamenywa ukuba athathe inxaxheba kumboniso, umnquba onguNombolo: 5c-b33, sibonise iibhetri ze-lithium-ion, iibhetri zepolymer, iibhetri ze-nickel hydrogen ...
Uhlalutyo lwebhetri ye-lithium kunye nomzi mveliso omtsha wezithuthi
Kwimeko yokuphuhliswa okukhulayo kwezithuthi zamandla amatsha, izithuthi zombane eziyi-2.2 zithengisiwe kwihlabathi liphela ngo-2019, ukwanda kwe-14.5% ngonyaka, kubalwa i-2.5% yentengiso zizonke. Okwangoku, malunga nentengiso yamandla esithuthi, i-BYD ibekwe kwindawo yesibini nguTesla. Kunyaka we-19 ...
3.7 Ibhetri egcwalisekayo, Li Ibhetri, ILithium Ion Polymer Ibhetri, Ngo-18650 uNimh, Ipakethe yeLithium yebhetri eyi-12 yeVolthi, Ibhetri ye-12v yeLithium Ion enokutsha, Zonke iiMveliso